မန်လေး မှာ လူသတ်မှုများ ဖြစ်နေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မန်လေး မှာ လူသတ်မှုများ ဖြစ်နေ
မန်လေး မှာ လူသတ်မှုများ ဖြစ်နေ
Posted by Mobile House on Aug 10, 2011 in Myanma News | 17 comments
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ် လောက် က မိန်း ထဲ ၇၃ လမ်း သုံး လမ်းဆုံ အကွေ့ မှာ ည ၉း၃၀ လောက် ကို ၄ယောက် ၈ယောက် ရန်ဖြစ်ကြ တယ်။၄ယောက်မှာ ၃ ယောက် က ပွဲခြင်း ပြီးသေတယ် ဟုသိရပါတယ်။ကျန်၁ ယောက်က်လဲ အခြေအနေ မကောင်းဘူးသိရပါတယ် ။ ဟိုဘက် က လူကြီး သား တစ်ယောက်ပါတယ် လို့ ကြားရပါတယ်။ ဖြစ်တဲ့နားက ဆိုင်ရှင်တစ်ယောက် က ကား ၊ဆိုင်ကယ် နံပတ်တွေ ပြောပြသော် လဲ ဘာမ မလုပ်ဟုသိရပါတယ်။
မနေ့ ညကလဲ ဂျစ်ကားကို DT နဲ့ကောင်လေးက ကျော်တာကို ဂျစ်ကား က ပြန်လိုက် ပြီး ကားပိတ်ရပ် ကာ ချိန်းကြီုး ဖြင့် ရိုက် တယ်။မိန်းထဲမှာပဲလို့ ကြားပါတယ်။ရန်ြcိုး မရှိ လိုသိရပါတယ် ။သူကိုတော့မိပါတယ်။သေတဲ့ ကောင်လေး ရဲ့အမေ က တရားခံ ကို သတ်ချင်တာ ရဲတွေကြောင့် သတ်မ ရ လို့ ရူးသွားပြီးတိုက်ပေါ် မှခုန်ချကာ ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ် ။ ခုတလောလမ်ပေါ်မှာ လူနည်းသွားပါ တယ်။
မန်းလေးမှသူများလဲ ညဘက်ထွက်ရင် သတိထားကြပါ ။
လူကြီးသားက ဘယ်သူ ၊ လူကြီးက ဘယ်သူ၊ ကား နဲ့ ဆိုင်ကယ် နံပါတ်တွေ တင်ပေး နိုင်ရင် ပိုကောင်း
မလားလို့.. ဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူး ၊ သိခွင့်ရတဲ့ သဘောမျိုးပါ ၊
အဲလောက်ဖြစ်တာတောင် ကျနော်တို့ ဘာသံမှ မကြားရပါလား..ဗျာ
ဆပ်ကြေး လိုက်ကောက်ဖို့ ပဲသိတယ်ထင်ပါတယ်…….
တိတိကျကျလေး လက်ညှိုးထိုး ပေးနိုင်ရင် စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတစ်ပုဒ်ပါ
ဒီနေ ရာ မှာ ဘလက်ပရင့် ပြောတာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း
ကျွန်တော် ၀င် အားပေးပါမယ်
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် 73 လမ်း မိန်း ( တက္ကသိုလ် ) ဘက် မှာ ညတိုင်း ရှိနေလို့ ပါပဲ
ရန်ပွဲ က တော့ တစ်ရက် တစ်ပွဲထက် မက အနည်းဆုံး ရှိပါတယ် ။
မန်းတလေး ဆေးရုံကြီး က ညပိုင်း တာဝန်ကျ ဆရာဝန် တွေ ပိုသိမှာပါ
အဲဒါဆိုရင်တော့ မန်းသားတွေတော်တော် ဆိုးကြတာပဲနော် ။ ပြီးတော့ Yangon United မန်းမှာ
လာကန်တုန်းကလည်း ရထားကိုခဲတွေနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြတယ် ။ ကိုယ့်နိုင်ငံသားအချင်းချင်းတောင်
အဲဒီလိုဖြစ်ကြတယ် ။ အခုလည်းကြည့်လေ တခြားနိုင်ငံက လာကန်တော့လည်းအရှက်မရှိ လုပ်
ကြတယ် ။ အဲဒီလိုလူတွေရှိနေလို့ နိုင်ငံမတိုးတက်တာပေါ့ ။ သူတို့တွေက ရန်ဖြစ်တာကိုပဲ
ဂုဏ်ရှိသလို ဘာလိုလိုနဲ့ ။ အရမ်းမုန်းတာပဲ ။ မန်းကရန်ကုန်ထက် စာရင်အများကြီးစည်းကမ်းရှိ
တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောတာပေါ့နော် ။ လမ်းပေါ်မှာဆိုလည်း အမှိုက်တစ်စက်
မှမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။ မန်းမြို့ ကို မန်းတောင် ပေါ်ကကြည့်ရင်လည်း အရမ်းလည်းလှပါတယ်။
ဒါပေမယ့်မန်းသားတစ်ချို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေက အရမ်းမိုက်ရိုင်းတာမြင်ဖူးပါတယ်။
သိချင် ၁၉၉ သို့ ဖုန်းဆက်ပါ ။အတိအကျ မသိရတော့ ပြောလို့ မကောင်းဘူး ။ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်း တို့ သတိထားဖို့တင်ပေး တာပါ ။
မိန်းထဲ မေ၇ာက်တော. သတင်းတွေမကြား၇ဘူးဗျာ
မြန်မာပြည်မှာ ကူညီပါရစေတွေက သူတို့အတွက်ပဲထင်ပါတယ်
ဒီမှာ ခေတ်စားတာ ကြာလှပြီ … ညဘက် ပြိုင်ကားမောင်းပြိုင်ပွဲတောင် ရှိသေးတယ်ဆိုပဲ … ဟိုမင်းသမီးလေးတောင် အဲ့ဒီအဖွဲ့ထဲ ပါသေးတယ် တဲ့ .. ။
ဘူလေးလဲ ဟင် etone မမ။ မီးလည်းသိချင်လို့ ။
Mr.lone ဆိုပြီး … ဟီးဟီး… မဟုတ်မှလွဲရော.. ဖြိုးတို့ … အဘုပတို့ အ ဖွဲ့ ဝင်များလား .. ။
မပြောပြဘူး … သတ်ချင်သတ် ဟဲဟဲ
ဘယ်မြို့သားကတော့ ပိုမိုက်ရိုင်းတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး ဒီလိုပါပဲ မြို့တိုင်းမှာ ရိုင်းတဲ့လူတွေ ကောင်းတဲ့လူတွေ ရောနေတာပါပဲလေ မန္တလေးသားတွေက တော့ဟန်ဆောင်မှုမရှိတော့ စိတ်ထဲမှာ မထားကြပဲ ရန်ပဲ ဖြစ်နေကြတယ်ထင်ပါရဲ့ အော်……မြန်မာပြည်က အခေါင်ကမှ မိုးမလုံတော့လဲ…………..
ဒီနေ့ လဲ ၇၄ လမ်း ၃၂ လမ်းနားမှာ ရန်ဖြစ်ကြတယ် တဲ့။ည ၈း၄၅ လောက်ပါ ။DT တွေနဲ့ superforce တွေစီး တဲ့ အဖွဲ့ တွေရန် ဖြစ်ကြတာပါ ။
နောက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေ အင်တာနက်ဆိုင်အအေးဆိုင် ဆိုင်ပေါင်းစုံလဲရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မန်းလေးတစ်မြို့လုံးကတော့ ရန်ဖြစ်မနေတာသေချာပါတယ်။
အင်. သတင်းကမဟုတ်လို့ လား ကိုပေါက်။ကိုပေါက် အိပ်ပျော်နေလို့ များလား။အတိအကျသိရရင်ကောင်းပါတယ်။ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ အုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ သောင်းကျန်းဖို့ မိဘ ကဆိုင်ကယ်ဝယ်ပေးသလိုဖြစ်နေပါပီ။ဟိုးတုန်းက စကားပုံတစ်ခုရှိတယ်. သားကိုသေစေချင်ရင်ဆိုင်ကယ်ဝယ်ပေးပါ၊သူငယ်ချင်းကိုမွဲစေချင်ရင် ကင်မရာဝယ်ပေးလိုက်ပါတဲ့. ဟိ ဟိ. ခုလဲ အဲ လိုဖြစ်နေပီနော်